Ọzara Sonoran | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | United States, Nduzi
Like na-amasị gị ọzara? Enwere ọtụtụ na kọntinent niile na otu n'ime ihe kachasị mkpa na North America bụ Sonoran Desert. Ọ gafere site na United States na Mexico, ya mere ọ bụ akụkụ nke otu oke ala dị n'etiti mba abụọ ahụ.
Ọzara bụ ndị pụrụ iche, ha nwere nri anụmanụ, ahịhịa ha, omenaala ha. N'ụbọchị, ha na-emebi ihe mgbe ụfọdụ ma n'abalị ha na-emeghe ihu igwe na kpakpando, na-akpọ onye ọ bụla gafere ha ka ha nwee mmetụta dị obere na mbara igwe. Taa, njem na Sonoran Desert.
1 Ọzara Sonoran
2 Nlegharị anya na Sonoran Desert
Dị ka anyị kwuru, dị n’ókè United States na Mexico, na ndịda ọdịda anyanwụ United States, na Arizona na California. N'akụkụ Mexico, ọ bụ ọzara kachasị mma nke niile ma nwee ngụkọta 260 puku square kilomita.
Ọzara ahụ dị na nsọtụ ebe ugwu Ọwara Oké Osimiri California. N'ebe ọdịda anyanwụ ya na Peninsular Mountain Range na-ejedebe ya, nke kewara ya na apịtị California, ruo n'ebe ugwu, ọ na-aghọ ebe dị jụụ, nke nwere oke ugwu. N'ebe ọwụwa anyanwụ na ndịda ọwụwa anyanwụ ọ na-amalite ibupụta na conifers na nnukwu osisi, na ndịda, n'oké ọhịa ndị ọzọ kpọrọ nkụ.
N’ọzara a osisi na anụmanụ pụrụ iche na-adị ndụ: Umu amphibians 20, umu anumanu 100, iri azu 30, umu nnunu nari ato na iri ise, umu anumanu 350 na gburugburu osisi puru iche nke abuo ... enwere ọtụtụ jaguars, bụ naanị ndị nọ na United States.
Eziokwu bu na na ozara enwere ọtụtụ ogige ntụrụndụ mba na ihe ncheta, ma nke mba ma nke ala, anụ ọhịa na ebe nsọ, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ọdịdị ala ndị a enwere ọtụtụ ebe na-atọ ụtọ iji nweta ozi.
Ndi mmadu bi na Sonoran Desert? Ee, ọ bụ mgbe niile ka ụlọ maka ọdịbendị dịgasị iche iche. Ọbụna taa, ihe dị ka mmadụ iri na asaa ndị Amaala America bi na ya iche iche pụrụ iche kesara na California na Arizona, kamakwa na Mexico Obodo kacha n’ọzara bụ Phoenix, Arizona, nke ihe karịrị nde mmadụ anọ bi na ya, n’Osimiri Nnu ahụ.
A makwaara obodo na-esote ya, Tucson, n’ebe ndịda Arizona, ihe dị ka nde mmadụ bi na ya, na Mexicali, na Baja California.
Nlegharị anya na Sonoran Desert
Ha na-ekwu na ọzara a juru ndị na-eleta ya anya na nke mbụ ya. Akọrọ, sara mbara ma na-adọrọ mmasị maka ndị na-enwe ọ exploụ n'ịchọgharị ụkwụ n'èzí n'ụkwụ, site na igwe kwụ otu ebe, na ụgbọ ala. Ee n'ezie, enweghị ike ịgagharị na-enweghị ụfọdụ usoro igodo n'ihi na ị nwere ike ịlafu ngwa ngwa na ... nke ọma, nwee ezigbo oge. Adịla jụụ na-eche na ekwentị na-edozi ihe niile, ọ naghị afụ ụfụ inwe map akwụkwọ ebe ọ na-adaghị batrị ma ọ bụ tufuo mgbaama ahụ, ihe a na-ahụkarị n'ọzara.
E wezụga ngwaọrụ GPS kwa kwesịrị iweta mmiri na itinye aka na-a aụ otu lita kwa awa, na nri. Uwe bụkwa ihe dị mkpa n’ihi ihu igwe dị oke egwu: O nwere ike ịmị ọkụ ma ọ bụ oke oyi, dabere na oge nke afọ ma ọ bụ njem ị họọrọ ime nke ga-akpọrọ gị, ikekwe, ugwu ma ọ bụ canyons.
El Sonora Desert National Ncheta E hibere ya na Jenụwarị 2001, n'okpuru Onye isi ala Clinton, iji kpuchido mpaghara ahụ niile yana gburugburu ebe obibi ya. Eziokwu bu na o sitere na a ihe okike di iche iche ezigbo: site na ugwu ndi ugwu kewara site na ndagwurugwu sara mbara rue saguaro cactus oke ohia, nke a. Na mgbakwunye na flora na fauna, ebe a na-echekwa nwere saịtị dị mkpa akụkọ ihe mere eme.
Enwere nkume nwere eserese ọgba, okwute ebe a chọtara ihe mgbe ochie, foduru nke ebe obibi na-adịgide adịgide, ebe ochie nke umu mmadu na oge ochie ụzọ gasị dị ka Mormon Battalion Trail, Juan Bautista de Anza National Historic Trail ma ọ bụ Butterfield Overland Stage Route ...
N'etiti saịtị nke mmasị n'ime ogige anyị nwere ike ikwu banyere ụfọdụ. Dịka ọmụmaatụ, ya Ogige Ntụrụndụ Saguaro. Saguaro bụ a obere kaktus nke ahụ mgbe ụfọdụ na-ewere ụdị mmadụ. Ọ pụrụ iche na mpaghara ahụ ma nwee ike iru nnukwu elu, ruo n'ókè nke na ọ bụ ụdị nchekwa ugbu a. Ogige ahụ nwere mpaghara abụọ, ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ, ha mepere site na ọwụwa anyanwụ ruo ọdịda anyanwụ, belụsọ n’ụbọchị ekeresimesi. Enwere ebe nleta na mpaghara abụọ ma ọ na-efu $ 5 iji banye n'ụkwụ ma ọ bụ site na igwe kwụ otu ebe.
Ebe ọzọ na-adọrọ mmasị bụ Organ Pipe kaktus National Ncheta. Ọ bụ ọhịa, ugwu ogige, na a mara mma nchịkọta osisi ebe ngwa anwụrụ kaktus bụ kpakpando, na cactus kacha elu na mba. E nwere ebe nleta, nke na-emechi naanị na ezumike gọọmentị etiti. Ọ bụ oge dị elu na February, Machị na Eprel. E nwekwara Ọdọ Mmiri Havasu, otu n'ime ọdọ mmiri kachasị ewu ewu nke mmiri dam na Osimiri Colorado.
A maara ọdọ a maka ya Akwa mmiri London, site na ebe echiche ahụ dị, n'ihi na ọ na-ele anya na obodo Bekee na ụlọ Tudor gụnyere. Ọ mara ezigbo mma. A mụrụ Lake Havasu City mgbe ewuchara Parker Dam ma bụrụ obodo na-enye ọtụtụ ihe. I nwekwara ike ime ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri ma na-adọta ndị njem nleta na afọ niile. Nwere ike ịga ụgbọ mmiri, gaa ịkụ azụ na ịme ihe n'èzí. Na gburugburu e nwere Ogbunigwe akụkọ ihe mere eme, obodo ndị a gbahapụrụ agbahapụ, ụzọ ụkwụ dị mkpa...
El Ogige Ntụrụndụ Katcher Caverns na-elekwasị anya na Katchner Caverns nke achọpụtara na 70s. Bụ a nnukwu ọgba, nke nwere ọnụ ụlọ abụọ hà ka bọl bọọlụ, ma taa enwere ike nyochaa ya mgbe ị gachara njem nke ga - enyere gị aka ịmasị ịma mma ya dị n'ime. Saịtị a mepere kwa ụbọchị site na 7 ruo 30 na ụtụtụ na njegharị na-apụ kwa nkeji 6. Ọ na-emechi naanị n’oge ekeresimesi.
El Ogige Pico Picacho State Ọ dị na Interstate 10 nke dị na ndịda Arizona ma nwee ugwu a toro oke ogologo. Enwere ụzọ ụkwụ na-enye gị ohere ịghọta mma nke odida obodo na ọ kacha mma ime ya na mmiri maka ọhịa okooko osisi. O nwere ebe nleta nke nwere ụlọ ntu na ebe a na-ama ụlọikwuu, ebe a na-eme picnic ... N'ebe a, n'oge Agha Obodo America, Agha Paso Picacho mere na kwa afọ, na Machị, enwere mmegharị nke agha akụkọ ihe mere eme.
Na-ekwu okwu nke akụkọ ihe mere eme na saịtị ebe a na Sonoran Desert ọzọ mma bụ Risonlọ Mkpọrọ Yuma Territorial, a ndụ ihe ngosi nka nke ochie ọdịda anyanwụ. Ihe karịrị ndị omekome 3 gafere ebe a, n'ime afọ 33 ụlọ mkpọrọ nọ na-arụ ọrụ, tinye 1876 y 1909. A na-echekwa ụlọ nche na akwa adobe nke ọma ka ọbịbịa ahụ na-atọ ụtọ. Saịtị a dị na Arizona ma ị nwere ike ịmata ya ma ọ bụrụ na ị kpebie ịmara mpaghara Yuma.
Prisonlọ mkpọrọ ahụ dị n’etiti Ọzara Sonoran na mpaghara ahụ bụ otu n’ime sunniest na mba ahụ nke mere na ọ dị oke ọkụ… Ma ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ akụkọ banyere Old West. Ọ bụrụ otu a, tinye nleta na Yuma ịgafe Historical Park ya na ụlọ ochie ya na ụzọ ụgbọ njem ya, ndị akaebe nke oge ahụ.
N'ikpeazụ, anyị nwere Deslọ Ahịa Arizona Desert - Sonora. Bụ a Nchikota nke ihe omuma ihe omuma ihe omuma, ulo zoo, na ubi botanical. Enwere ihe ngosi ntụgharị na ụmụ anụmanụ, bi na mpaghara ha, yana ihe dịka kilomita ise nke ụzọ ụkwụ na-aga n'ọzara. Okirikiri ala mara mma na oge kachasị mma iji gaa bụ site na Septemba ruo Ọktọba, mgbe ihu igwe dị nro.
Thelọ ihe ngosi nka nwere ọtụtụ ngalaba: Cactus Garden, Hummingbird Aviary, Cat Canyon, anụ ọhịa na-emegharị emegharị, ebe obibi na mineral ha… Enwere ọtụtụ ngalaba iji chọpụta na nke ọ bụla na-enye ọdịdị dị ebube. Ọ bụ oasis okike.
Ka ọ dị ugbua ihe atụ nke Sonoran Desert na-echere anyị. Ọ bụrụ na ala ndị a bụ ihe gị, eziokwu ahụ bụ Ọ bụ ebe njedebe agaghị echefu na United States.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » United States » Ọzara Sonoran